Ny Andron'ny Kuhio dia nahatonga ny fahefan'ny fizahantany any Hawaii hanadino ny fiakarana isa COVID-19
Home » Hawaii Travel News » Ny Andron'ny Kuhio dia nahatonga ny fahefan'ny fizahantany any Hawaii hanadino ny fiakarana isa COVID-19
Ny fanjakana amerikanina Hawaii dia miankina amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Ny fahatongavan'ireo fizahantany tamim-pahanginana dia nirongatra tamin'ny volana lasa raha ampitahaina amin'ny fotoana rehetra amin'ny areti-mifindra. Haharitra ve izany?
Ny isan'ny fitsidihan'ny mpitsidika an'i Hawaii avy any Etazonia dia nitombo isa ho an'ny firaketana tato anatin'ny 4 herinandro lasa
Hawaii koa dia nanoratra andro iray androany tamin'ny isan'ny tranga COVID-19 vaovao nandritra ny iray volana mahery
Ny Andron'i Kuhio dia antony fandraisana olona lehibe ho an'ny mpitondra fizahan-tany hankalazana sy hangina amin'ity toe-javatra mivoatra ity ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Hawaii, ny toekarena ankapobeny ary ny toe-pahasalamana.
Andron'ny Prince Kūhiō any Hawaii androany, ary ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta dia tsy misy hamaly na haneho hevitra momba ny fiakaran'ny tratran'ny aretina COVID-19 ao amin'ny Aloha Milaza mandritra ny 2 andro farany. Hawaii dia niverina tamin'ny firongatry ny fampitomboana isa telo izay manaraka ny isa tsy mitsaha-mitombo ny fahatongavan'ireo mpitsidika avy amin'ny tanibe amerikana nandritra ny herinandro vitsivitsy lasa izay. Androany dia nandrakitra tranga vaovao 126 ny Fanjakana.
Nilaza ny ben'ny tanànan'i Honolulu kokoa miteny Rick Blangiardi eTurboNews ao anaty fanambarana:
Oahu dia mbola ao anatin'ny metatra Tier 3 amin'ny paikady fanokafana indray. Ny tanàna dia manara-maso ny toe-javatra misy ankehitriny ary mahatsikaritra fa nisy fiakaran'ny tranga COVID-19 tsara nandritra ny herinandro lasa teo tao O'ahu. Ny fahasalamam-bahoaka no laharam-pahamehana ary ny tanàna dia manohy ny fiaraha-miasa amin'ny Departemantam-panjakana misahana ny fahasalamana sy ny fahasalamana mba hanombanana ny loza mety hitranga sy hanao fanitsiana raha ilaina izany. Manohy manokatra soa aman-tsara ny toekarena ahafahan'ny olona miverina miasa indray izahay. Ny vondrom-piarahamonina dia tokony hiara-hiasa ihany koa mba hisorohana ny fihanaky ny viriosy amin'ny alàlan'ny fanohizana ny fanaovana sarontava, mijanona tsy lavitra ara-batana ary manaraka ny fitsipiky ny paikady misokatra indray.
Mandritra izany fotoana izany, misy zotram-piaramanidina iray hafa izay manambara sidina anatiny vaovao mankany amin'ny tsenan'ny mpitsidika fanampiny. Ny sasany amin'ireo sidina ireo dia miasa avy any amin'ny faritra izay noheverina ho faharoa ho an'i Hawaii, fa ny tsena voalohany ho an'i Karaiba.
Raha heverina fa mbola tsy natomboka indray ny fahatongavan'ireo tonga iraisam-pirenena avy any Canada, Japan, Korea, Australia, New Zealand, dia tsy nampoizin'ny maro ny firongatry ny fandraharahana an-trano mahagaga.
Amin'ny fotoana fohy ny fitomboan'ny mpitsidika dia vaovao tsara ho an'ny hotely, fisarihana, trano fisakafoanana, fivarotana ary ny sehatry ny fitaterana, nefa mety ho voina koa amin'ny fotoana maharitra.
Araka ny Hawaii fizahan-tany fizahan-tany mankalaza ny Andron'ny Prince Kuhio androany, tsy hisy hevitra momba an'io toe-javatra io raha tsy ny Alatsinainy, Alatsinain'ny Paka no antenaina. Ny iray dia tsy afaka manantena afa-tsy ity dia nanjary olana moana tamin'ny alatsinainy teo, miankina amin'ny isa voan'ny COVID-19 ao anatin'ny roa andro ho avy.
Mandritra izany fotoana izany i Hawaii dia manao tsara amin'ny fanaovana vaksiny ny olom-pireneny. Hatramin'ny alatsinainy dia misy olona 60 na mihoatra afaka mahazo ny vaksininy, ary ny vondrona laharam-pahamehana rehetra dia efa vita vaksiny.
Maninona i Hawaii no mankalaza ny Andron'ny Prince Kuhio anio?